Ajjeechaa Hiddii Lolaa: Mucaa intala fuudhuufi intalatu dura rukutame - BBC News Afaan Oromoo
Ajjeechaa Hiddii Lolaa: Mucaa intala fuudhuufi intalatu dura rukutame
Image copyright Kominikeeshinii aanaa Miyoo
Goodayyaa suuraa Awwalchi namoota shanii bakka tokkotti raawwatame.
Sirni awwaalcha misirrootaa lamaaniifi waahillan isaanii sadii Kibxata godina Booranaa aanaa Miyoo naannoo Hiddii Lolaatti ajjeefamanii, har'a bakka tokkotti raawwate.
BBC Afaan Oromoos kaleessa odeessa hojjenneen (as cuqaasaa) misirroonni maqaan isaanii Kottoolaa fi Cuquliisa jedhamanii fi waahillan isaanii kunniin ruufa maratanii, durba fuudhanii cidhaa osoo galanuu ajjeefamuusaanii gabaasneerra.
Sirna awwalchaa har'a raawwatame kanarratti namoonni hedduun argamanii gaddaa fi mormii guddaa dhageessisanii oolan.
Maanguddoon aanichaa sirna awwaalchaarratti argaman 'hojiif socho'uu rakkannee, galgala mana fincaaniif gadi hin baanu, waan aanaa Miyoo keessa hin jirre ya nutti dhufe,'' jedhan.
''Wanti dhufe nu hundatti dhufe malee ijoollee kan callaatti hin dhufne, uummatni kun hundi awwaalchaaf bahuun kanaaf ragaadha'' jedhan.
'Obbolaa lamaan kan ajjeese kora bittinneessaadha''
''Humni Ittisaa iddoo dahannoo ADWUI isa dhumaatii?''
Aanaarraa qabee hanga godinaatti qaama raayyaa ittisa biyyaa bifa hirmaachiseen qaamolee ajjeechaa kana raawwatan qoratanii seerrattii dhiyeesuufis awwaalcha booda koreen hundaa'eera.
''Koreen dhaabate kanaa abbaan uummata kana wal duukaa dhaabannee dhiiga ijoollee kanaa barbaanna'' jedhan maangudoonni.
Ajjeechaa raawwatameen dabalataan hidhaa fi doorsifni maqaa barbaacha ABO'n irratti raawwatamaa jiru akka dhaabatus ummatni waliin rabbi kadhataniiru.
''Nuti ABO miti mootummaatu galaa jedhee galche malee uummatni harka qabee hin galchine. Wanti miidiyaan himamu kan dhibii kan warri hojjetu kan dhibii'' jechuunis komii mootummarraa qabanii ibsaniiru.
Maatiifi biyyi hedduu gadde
Obboleessi hangafaa misirroo ajjeefamee akka aadaa Booranaatti horiifi waan aadaa qabatanii waliin araara yaa'ani obboleessi isaaf waahillan isaa biroon misirittii fuudhanii wayita bahan sirna kana raawwachuuf boodatti hafuu nutti hime.
''Ijoollee fuudha yaate kana rasaasa irratti fixanii yoo achi gahu nama itti yaa'u dhorkaa turan namniis dheessaa ture'' jedha.
Goodayyaa suuraa Hiddii Lolaa, Finfinneerraa gara Kibbaa km 721rra daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gargar baasuurraa kiloomeetiroota muraasa fagaattee argamti
Halkan sa'aa 10 misirroota lamaan dabalatee namoonni du'uu isaanii warra mootummaarraa dhageenyes jedha.
Obboleessi isaa nama barnoota hedduu hin arganne umuriinis ganna 20 keessa jiru akka ta'es nutti hime.
Erga ajjeefamuun isaaniii dhagahamee maatiin gadda guddaa keessa akka jiru nutti himee, ''nama waliin hin jirruu diina waliin, nyaapha waliin jirra,'' jedha.
''Obboleessi isaa ajjeefame maatii isaaf ilma sadaffaa ture.
Bakki awwaalchi itti raawwate qe'ee maatiirraa fagaatee gochi kun seenaan akka yaadatamu bakka tokkotti raawwatames, '' jedheera.
Harmeen misirrichaa bakka awwaala kanarraa fagoo waan jiraniif, awwalcharratti akka hin argamnes nutti himeera.
''Mucaa intala fuudhuufi intalaatu dura rukutame''
Namoota ajjeefamanin dabalataan namoonni lama miidhaa irra gaheerra kan ka'e Hospitaala Yaabellootti rifariin ergamanii waldhaanamaa jiru.
Bonayyaa Liiban dhukaasa banameen rasaasa shaniin harka isaarra rukutame Hospitaala Yaabeellootti yaalamaa jira.
''Harka mirgaa fi miila bitaa rasaasa shaniin na dhawani,'' jedha Bonayyaan.
Amma hospitaala keesatti waldhaansa kennamaafi jiruun bayyanachaa jira.
Weellisaa Daadhii Galaan akkamiin lubbuun dabarte?
Dhukaasa itti banamuu tasa osudhuma motoraan 10 ta'anii imalaa jiranii arguu yaadata.
Galgala naannoo sa'aa 1:30 waan ta'eef namoota dhukaasa itti bane adda baasuu akka hin dandeenye himee, ''raayyaa ittisa biyyaa ta'uun hinuma beekama,'' jedha.
Rasaasa dhuka'uu jalqabeen ''mucaa intala fuudhu (Kottoolaa) fi intalatu (Cuquliisa) dura rukutame,'' nuun jedhe.
Goodayyaa suuraa "Namootni kun ruufa maratanii, durba fuudhanii cidhaa osoo galanuu ajjeefaman"
Erga rasaasaan rukutamee booda lubbuu isaa muka jala dhokachuun oolfachuus nutti hime.
Erga dhukaasa dhaabanii reeffa fuudhanii deemanis ,'' jedha Bonayyaan.
Dhiyoorraa isaanitti dhukaasuu fi lakkoofsa namoota dhukaasaa turanii adda baasuu akka hin dandeenyes hima.
Namni biraan Jaarsoo waariyoo jedhamus hospitaala Yaabelloo isa waliin akka jiruufi haga ammaa dubbachuu akka hin dandeenye nutti hime.
Hogganaan hospitaala Yaabelloo obbo Areeroo Biqicha namoonni lameen cabni qaban hidhameefii yaalii baqaqsanii yaluus taasifamee amma haala lubbuuf yaaddessurra hin jiran jedhan.
Itti aanaan hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa fi ajajaan bobbii waraanaa Janaraal Biraanuu Julaa Raayyaan ittisa biyyaa yakka akkanaa uummata nagaarratti hin raawwatu jechuun dhimmicha irratti deebii kennaniiru.
Ajjeechaa Miyoo: 'Durba fuudhanii cidhaa osoo galanuu ajjeefaman'
13 Guraandhala 2019
Iyyaasuu fi Lalisaa Qanaatee: Obbolaa lamaan kan ajjeese kora bittineessaa ta'uu ijaan argineerra jedhan maatiin
12 Guraandhala 2019
MM Abiy Ahimad: Itoophiyaan yoo jiraatte amma raayyaa iitisa biyyaa keessa jirti
9 Sadaasa 2018
Weellisaa Daadhii Galaan: Dhukaasa gammachuuf dhuka'u keessa lubbuu dhabe
Itoophiyaatti namni tokko guutummaan koronaavaayirasii irraa bayyanate
Vaayirasiin koronaavaayirasii fakkaatu paangolin irratti argame
'Iyya dabarsaa Gullalleedhaa hanga Sulultaa'
'Yeroo Covid-19 hammaatetti intarneetiin Lixa Oromiyaatti cufame turuun isaa baay'ee nu yaachise'
Xaaliyaaniin guyyaa tokkichatti koronaavaayirasiin lammiilee 900 ol dhabde
Malawwan ittiin odeessaalee sobaa dhaabuun danda'amu torba
"Ummata keenya balaa hamaa dhufuu malurraa baraaruuf tattaafachaa jirra"
Tuniziyaatti hojjattoonni karra warshichaa cufachuun maaskii omishuu eegalan
Ministirri Muummee UK Booriis Joonsan koronaavaayirasiin qabaman